Ingqokelela yeePics zeChantelle Connelly - I-Celebs Ehamba Ze
Ingqokelela yeePics zeChantelle Connelly
Jonga ingqokelela yenyani yokwenyani yesiNgesi uChantelle Connelly ehamba ze, iifoto ezingenasondo kunye nezenzo zakhe zesini kunye noJemma Lucy!
UChantelle Connelly wohlukane nesoka lakhe uLee kwiinyanga ezintandathu emva kokuzalwa konyana wabo. Umntu oneminyaka eyi-29 wabelana ngeevidiyo ezininzi kwi-SnapChat nakwi-Instagram yakhe apho aqinisekisa khona ukuba akatshatanga. Abalandeli bakhe bahambela umzimba wakhe, kwaye omnye wamnika amazwi okhuthazo. Abalandeli bakhe bayazisola ngaye nokwahlukana kweqabane. Skrolela kwaye wonwabele ukubukela eli henyukazi lesiNgesi likhulu lobuxoki kunye neesile!
UChantelle Connelly wayekwiqela labadlali ' UGeordie Shore ‘. Ushiye umboniso ngo-2016 emva kothotho olunye. Unomntakwabo kunye nodade ogama linguSacha. Kwi-2016, waqala ukuthandana noKane Mousah kwaye ngaphambili wayenobudlelwane noTommy Sayers. Kwi-2019, wazala umntwana wakhe wokuqala. Kungekudala emva kokushiya umboniso, uConnelly waqalisa ubudlelwane bobufanasini kunye nomzekelo omhle kaJemma Lucy. UChantelle wabamba iintloko nangakumbi emva kokugwetywa ngokulwa nomntu wasetyhini kwiklabhu yasebusuku. Nantsi into esiyiqokeleleyo ngaye…
Okokuqala, yonwabela ngesenzo esithile se-lesbo sikaChantelle Connelly engenasiphelo ngelixa encamisa UJemma Lucy, ngubani ohamba ze sikwanayo nathi!
IChantelle Connelly boobs ehamba ze
Jonga uChantelle Connelly unganxibanga iifoto awabelana ngazo nabalandeli bakhe! Ezi zinqunu zikhangeleka ngokungathi ziyathetha, kodwa akunjalo! U-Connelly ubeka njengoko ubona, amabele akhe amakhulu kunye neengono ezigqobileyo zilapha, iesile lakhe liyabonakala, kodwa ngelishwa, wayifihla le pussy! Kutheni le nto i-fuck ocinga ukuba ubufazi bakho bunyulu awuyibonisi ngawo wonke umzimba ohamba ze? Ayiyo! Ngaphandle kwesifebe esivela kwi-'Geordie Shore 'ebonakalayo, wayesemaphephandabeni ngelixa ekhulelwe!
"lady gaga" uhamba ze
anne hathaway iifoto ezivuthiweyo
thina baselwandle bavuza ubunqunu
UJennifer aniston ongenasiphelo kwilanga